Ndị zụrụ ụlọ na Canada
Jiri RRSP nye aka inye ego ulo na Canada
Onye na-azụ ụlọ (HBP) bụ usoro gọọmentị gọọmenti etiti Canada nke na-enyere ndị Canada aka ịzụta ụlọ maka oge mbụ. Site na ndị na-azụ ahịa nke ụlọ, ị nwere ike iji $ 25,000 si na Ndebanye aha ezumike nká gị (RERs) na-enweghị akwụ ụtụ isi na ego ma ọ bụrụ na ị na-azụ ụlọ mbụ gị. Ọ bụrụ na ịzụrụ ụlọ gị na onye òtù ọlụlụ gị ma ọ bụ onye ọzọ ị nwere ike ịdọrọ $ 25,000 n'okpuru atụmatụ ahụ.
A pụkwara iji atụmatụ ahụ zụta ụlọ maka onye ikwu nke nwere nkwarụ, ọ bụ ezie na ọnọdụ dịtụ iche.
Malite afọ abụọ mgbe ị kwụsịrị, ị ga-enweta afọ iri na ise ịkwụ ụgwọ gị na RRSP gị n'ebughị ụtụ isi. Ọ bụrụ na ị kwụghachighị ego achọrọ n'afọ ọ bụla, mgbe ahụ, a na-ewere ya ego ego maka afọ ahụ. Ị nwere ike ịkwụghachi ya ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Nkwụghachi ụgwọ adịghị emetụta onyinye nkwekọrịta gị na RSP maka otu afọ.
Enwere ọnọdụ ole na ole maka Atụmatụ Ndị Na-azụ Ihe n'Ụlọ, ma ha nwere ezi uche, ụfọdụ na-enwekwa ọmịiko.
Kedu onye ruru eru maka ndị na-azụ ụlọ
Iji ruo eruo ịdọrọ ego site na RRSP gị n'okpuru Ụlọ Ahịa Na-ere Ihe:
ị ga-abụ onye bi na Canada
ị ga - abụ onye nwe ụlọ ọrụ RRSP (s)
ị ghaghị inwe nkwekọrịta edere iji zụta ma ọ bụ wuo ụlọ
ị gaghị enwe ike ịnweta ụlọ maka ihe karịrị ụbọchị 30 tupu i wepụ ego ahụ
ị ga-ebu n'obi ịbanye n'ụlọ dịka ebe obibi gị kachasị elu karịa otu afọ mgbe ịchọrọ ịpụ
ị ghaghị inwe nguzozi na-ahapụ òkè mbụ ị na-ekere na Ụlọ Ahịa
ị ghaghị ịbụ onye zụrụ ụlọ mbụ. A na-ewere gị dị ka onye na-azụ ụlọ oge mbụ ọ bụrụhaala na gị ma ọ bụ onye òtù ọlụlụ gị ma ọ bụ onye mmekọ ibe gị enwebeghị ụlọ dị ka ebe obibi gị isi ruo afọ anọ malite na January 1 nke afọ anọ tupu afọ ị wepụ ego ahụ.
Ndị RRSP bụ ndị ruru eru maka ndị na-azụ ụlọ
Ndebanye aha na-edebanye aha na ndokwa nke otu na-anaghị ekwe ka iwepụ. Ihe kachasị mma ịme bụ ịlele onye nyere gị (RE) gị ka ọ chọpụta nke n'ime ndị RRSP gị ị ga - enwe ike iji Ụlọ Ahịa Zụrụ Ụlọ.
Ezigbo ụlọ maka ndị na-azụ ụlọ
Naanị ụlọ niile dị na Kanada ruru eru maka Ụlọ Ahịa. Ụlọ ị zụrụ nwere ike ịbụ nzaghachi ma ọ bụ ụlọ ewuru ọhụrụ. Ụlọ ọnụ ụlọ, ụlọ ndị na-agbagharị agbagharị, ụlọ obibi, na ụlọ dị iche iche dị mma. N'ụlọ ndị kwadoro, otu òkè nke na-enye gị ntinye ego ruru eru, ma otu nke na-enye gị ikike ime ụlọ anaghị adị.
Otu esi enweta ego maka ndị na-azụ ụlọ
Usoro nke ịkwụsị ego RRSP dị mfe:
Dejupụta mpaghara 1 nke Ụlọ Ọrụ Canada Revenue Agency Ụdị T1036.
Were ụdị ahụ na-anọchite anya onye na-enye gị RRSP ma nye ya / ya jupụta na Mpaghara 2. Onye na-enye RRSP ga-ahapụ ego ịkwụsị gị n'ejighị ụtụ isi.
Na oge ụtụ isi, ị ga-enweta ụtụ isi T4RSP nke ga-egosi nkwụsị gị.
Ị ghaghị ịnye ụtụ isi ego gị . Tinye ihe ntinye T4RSP ma mezue oge nke 7 - RRSP Ngalaba enyere, Nyefe, na HBP ma obu LLP. Ejikwala aka n 'ego ọ bụla ị na-akwụ na-akwụ ụgwọ.
Ịkwụghachi ụgwọ RRSP gị maka ndị na-azụ ụlọ
I nwere afọ iri na ise iji kwụghachi ụgwọ ị kwụsịrị na RSP gị. Nkwụghachi ụgwọ na-amalite n'afọ nke abụọ mgbe ị kwụsịrị. Kwa afọ, ị ga-akwụghachi 1/15 nke ego ole ị kwụsịrị. Ị nwere ike ịkwụ ụgwọ kwa afọ ọ bụrụ na-amasị gị. N'ọnọdụ ahụ, a ga-achọ ka ị kwụọ ụgwọ ahụ nke na-ekewa site na ọnụ ọgụgụ nke afọ fọdụrụ na atụmatụ gị. Ọ bụrụ na ịnweghị ịkwụ ụgwọ ego achọrọ, mgbe ahụ, ị ​​ghaghị ikwupụta ego a na-akwụghị ụgwọ dịka ego RRSP na ịkwụ ụgwọ ụtụ isi.
Ịkwesịrị ịnye ụtụ isi ego ọ bụla n'afọ ọ bụla, mezue Ntọala 7, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị nweghị ụtụ isi iji kwụọ ụgwọ ma ọ nweghị ego ị ga-akọ.
Kwa afọ, ụtụ isi nyocha ụtụ isi gị nke Ntụle ma ọ bụ Ntụleghachi nke nchịkọtaghachi ga-agụnye ego ị kwụrụ na RRSP gị maka ndị na-azụ ụlọ, ihe nkwụsị nke fọdụrụ, na ego ị ga-akwụ ụgwọ n'afọ ọzọ.
Ị nwekwara ike ịchọpụta otu ozi ahụ site na iji ọrụ ụtụ isi Akaụntụ M.
More gbasara ndị na-azụ ụlọ
Maka nkọwa zuru ezu banyere ndị na-azụ ahịa nke ụlọ na-ahụ Atụmatụ Ego nke Ndị Na-azụ Ndị Na-azụ Ihe n'Ụlọ Ọrụ Canada (HBP). Onye ndu na-agụnye ozi gbasara Atụmatụ ndị na-azụ ụlọ maka ndị nwere nkwarụ, na ndị na-azụ ma ọ bụ na-enyere aka ịzụta ụlọ maka onye ikwu nwere nkwarụ.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịghọ onye zụrụ ụlọ mbụ, ị nwekwara ike inwe mmasị na Akaụntụ Ndị Na-azụ Ihe n'Ụlọ Mbụ (HBTC) .
The Origins nke British Columbia na Canada
T4 (Nkwupụta nke ụgwọ ụgwọ ụgwọ)
Gbanwee Adreesị Gị Na Canada Revenue Agency
Ozi Onyinye Ndị Akaụntụ nke Onwe Gị Online na Akaụntụ M CRA
Mahadum University nke Fontbonne
Ekele ekele na asụsụ Bekee
Ọdịiche Dị n'agbata Mbanye na Ịkwaga
Na-emepụta Ọnụ Ọgụgụ Dị Iche Iche
Njirimara nke football - Gịnị ka ọ pụtara mgbe otu egwuregwu nwere?
Ndụmọdụ ndị ọzọ na ndị nlekọta na United States
Kedu Ihe Bụ Ụkwụ Na-egbuke egbuke?
Amụma Nne na Ụba Amụma Nne na Amụma na-adaba na oge 2016
Ịgbanwe Verbs Site na Nfefe na-arụ ọrụ
Nlekọta Ice-Ice maka ndị na-atụgharị akwụkwọ: Ntak, Gịnị, Mgbe, na Olee otú
Movies, Films, na Actors
The Ford Mustang Sprint 2006 na 1966
Oge Ọhụụ - Na-atụgharị Anya
Top 6 Skateboarding Egwuregwu
Ụlọ Ọrụ Ngbaba Mmiri Na-egwu Mmiri
Igwe Igwe na Mgbochi, Mee Mecoptera
Ozi Ụbọchị Nna
Akwụkwọ akụkọ na akụkọ ihe mere eme Online
Ndepụta nke Ọchịchị Chemistry Na-ahụkarị
Ihe nkiri Hilarious Museum na-eche ihu na nke ahụ bụ Ezi Ọrụ nke Art